Showing 51-60 of 100 items.
धरानभित्रको सुन्दर गाउँ विष्णुपादुका (फोटोफिचर)
धरान: केही बर्षअघि तत्कालिन धरान नगरपालिकामा गाँभिनु अघि विष्णुपादुकाको अलग्गै अस्तित्व थियो । तत्कालिक विष्णुपादुका गाविस अहिले धरानको वडा नं २० भएको छ । हुन त अहिले पनि विष्णुपादुकाको पहिचान नामेट भएको छैन । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको पौराणिक महत्वको विष्णुपादुका मन्दिर छदैछ । तर, विगतमा जसरी विष्णु ...
प्रकाशित मितिः कार्तिक १६, २०७७
2,352 पटक पढिएको
धरानमा पाँचौ बास्केटवल ट्यालेण्ट हण्ट सकियो, २ दर्जन विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृतिका लागि सिफारिस
धरान: धरानमा तीन हप्तासम्म सञ्चालन भएको ‘पाँचौं संस्करणको बास्केटबल ट्यालेन्ट हण्ट’ शुक्रबार समापन गरिएको छ । धरान बास्केटवल संघको आयोजना तथा धरान उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालन भएको बास्केटबल ट्यालेन्ट हण्ट आज डिपोट मावि परिषरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी समापन गरिएको हो । गत साउन १ ...
1,302 पटक पढिएको
2,658 पटक पढिएको
दोस्रो पटक लकडाउनमा धरानको पहिलो दिन (फोटो/भिडियोसहित)
धरान: कोरोना संक्रमितहरुको संख्या निरन्तर बढ्दै गएपछि धरानमा आजदेखि पुनःदोस्रो पटक लकडाउन शुरु भएको छ । कार्यपालिका बैठकले साउन २८ गते राती १२ बजेसम्म लकडाउन गरेको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ । यसअघि संघीय सरकारले पनि लकडाउन गर्दाको अनुभव नगरबासीहरुले गरेका थिए । ...
3,552 पटक पढिएको
लकडाउनमा सुनसान इटहरी (तस्बिरसहित)
इटहरीः लकडाउनका कारण इटहरी सुनसान बनेकाे छ । हिजाे बसेकाे नगरस्तरीय सिसिएमसीकाे बैठकले काेराेना सँक्रमणबाट बच्न भन्दै ५ दिनकाे लकडाउन गर्ने घाेषणा गरेकाे थियाे । इटहरीकाे मुख्यचाैकमा नपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीले उच्च सुरक्षा सकर्तकता अपनाउँदै मानिसकाे अावतजावतलाइ नियन्त्रणकाे प्रयास गरेका छन् । अ ...
1,230 पटक पढिएको
लकडाउनले प्रभावित बनेको रोपाई (फोटो फिचर)
धरान: आज असार १५ अर्थात राष्ट्रिय धान दिवस । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समय । किसानहरुलाई यो बेला रोपाईमा भ्याई नभ्याई हुन्छ । सधैंको बर्ष देशभरी धुमधामले रोपाई गरेर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइन्थ्यो । तर, यसपाली कोभिड १९ को कारण जारी लकडाउनले गर्दा रोपाई महोत्सवहरु आयोजना भएनन् । महोत्सव मात्र होइन, असा ...
1,556 पटक पढिएको
आहा ! इटहरी रंगाशाला (फोटो फिचर)
इटहरीः राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले ६ महिना अघि निर्माण जिम्मा दिएकाे मलेसियन कम्पनीले अत्याधुनिक प्यारापिट निर्णाण गरिरहेकाे छ । असार समान्तसम्म सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेकाे बताएकाे निर्माण कम्पनीले याे कामकाे २२ कराेडमा सक्ने गरि जिम्मा लिएकाे हाे । स्टिल, फलाम र प्रिफ्याककाे बढि प्रयाेग गरिएकाे स ...
2,557 पटक पढिएको
रमणीय धरानको बाघखोप होम स्टे (फोटो फिचर)
धरान: धरान बजारदेखि करिव ८ किमि टाढा पर्छ, बाघखोप । धरान उपमहानगरपालिकाको पर्यटन विकास समितिले प्रथामिकतामा राखेका मध्ये एक हो धरानको २० नं वडास्थित वाघ खोप होम स्टे । पर्यटन समितिले यस क्षेत्रलाई पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास गर्ने योजना वनाएर अघि वढिरहेको छ । समुन्द्री सतहदेखि करिव एक हजार २ सय मिटर ...
4,553 पटक पढिएको
धरानमा युवा नेताको लकडाउन सदुपयोग (फोटो फिचर)
धरान: कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को महामारीको संक्रमण फैलन नदिन चैत्र ११ गतेदेखि सरकारले लागु गरेको लकडाउन भर्खरै मात्र केही खुकुलो भएको छ । यति लामो लकडाउनमा समय बिताउन मानिसहरुलाई निक्कै सास्ती भयो । लकडाउनको समय कटाउन कसैले घरको सरसफाई गरे, कसैले आफ्नो वारी गोडमेल गरे भने कसैले घरमा विभिन्न परि ...
प्रकाशित मितिः जेठ ३०, २०७७
3,630 पटक पढिएको
४९ दिनदेखि लांघाली क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरु सांगीतिक माहोलमा रमाए (फोटोफिचर)
धरान: सडकको विन्दास जिन्दगी । कोही मागी खाने, कोही मजदुरी गरेपनि सडकमै बास । कोरोना संक्रमणको त्रासले लकडाउनमा सबै घरभित्र सिमित हुदा पनि उनीहरु भने सडकमा स्वतन्त्र थिए । सडकमा रहेकाहरुलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम देखेपछि धरान उपमहानगरपालिकाले बैशाख १ गतेदेखि उद्दार गर्न थाल्यो । उनीहरुलाई सडकबाट उद् ...